Newsletter No. 9 Lohataona 2020 - Ny Valisoa Enti-miasa
Home Gazety No. 9 Lohataona 2020
Gazety No. 9 Lohataona 2020
Tongasoa eto amin'ny Lohataona! Manantena izahay fa mankafy ny toetrandro mahafinaritra ianao ary miatrika tsara ny tontolo hafahafa hitantsika rehetra amin'ity Springtime ity. Mijanona ho azo antoka.
Tao amin'ny The Reward Foundation dia nanararaotra ny banga tamin'ny diarinay izahay mba hahatratrarana asa marobe, anisan'izany ity gazety kely ity. Ahem! Ireto misy hetsika vitsivitsy izay nahatonga antsika ho sahirana tato anatin'ny volana vitsivitsy: ny fampisehoana atrikasa sy lahateny amin'ny toerana maro; mianatra fikarohana vaovao; mamokatra taratasy fikarohana isika; miresaka any an-tsekoly sy amin'ny mpanao gazety ary manomana ny paikadinay amin'ny taona ho avy. Fialamboly, mahafinaritra ary mahafinaritra kokoa.
Ho fanampin'ny fanasongadinana vaovao dia nifidy bilaogy vitsivitsy izahay tato anatin'ny volana vitsivitsy lasa izay sao diso amin'ny tranokala ianao. Ity misy rohy mankany amin'ny lisitra lehibe an'ny bilaogy.
Mora loatra ny mandany fotoana malalaka hikolokoloana sy hikolokoloana ny lafiny ratsy amin'ity fotoana ity. Ka mba hanarenana kely ny fandanjana dia ireto misy pôrtera vitsivitsy hametraka ny eritreritsika amin'ny lafy tsara:
“Tiako ianao amin'ny fofonaina, tsiky, ranomaso mandritra ny androm-piainako!” nataon'i Elizabeth Browning
“Ny fitiavana ihany no ananantsika, ny fomba tokana ahafahantsika mifanampy.” nataon'i Euripides
“Ny fitiavana tsy matotra dia miteny hoe: 'tiako ianao satria mila anao aho.' Hoy ny fitiavana matotra: 'Mila anao aho satria tiako ianao.' " nataon'i E. Fromm
Breny Vaovao ho an'ny Lohataona 2020
Azafady misoratra anarana amin'ny Vimeo to jereo ny tranofiara ho an'ny antontan-taratasy vaovao nataon'ny ray aman-dreny tany Nouvelle-Zélande. Scottish ny reny.
Maimaimpoana ilay tranofiara, fa dolara vitsivitsy kosa ny fijerena ilay horonantsary. Rob sy Zareen dia nanao izany tamin'ny teti-bidin-kiraro fametavetana tamin'ny fampiasana ny fahaizany sy ny fahavononany mafy, koa mba ividio azafady raha azonao atao. Misaotra.
BBC Scotland: Ilay sivy - Firaisana ara-nofo
Tamin'ny volana Desambra lasa teo, ny BBC Scotland The Nine dia nanadihady an'i Mary Sharpe TRF momba ny trangan-javatra manaitra ny raharaha momba ny firaisana ara-nofo taorian'ny nahafatesan'i Grace Millane tany Nouvelle-Zélande. Jereo ny dinidinika Eto.
Mary Sharpe, Filohan'ny The Reward Foundation ary mpanao gazety Jenny Constable, miaraka amin'ny studio studio The Nine Martin Geissler ary Rebecca Curran
Ity tranga mampalahelo ity dia tsy mitokana ary sarotra kokoa noho ny nisehoany voalohany. Araka ny fanadihadian'ny fanadihadiana tamin'ny The Sunday Times indroa fa vehivavy tanora latsaky ny 2019 taona (Generation Z) dia mifantina ny firaisana ara-nofo ary ny BDSM (fanandevozana, fanjakazakana, sadisma ary masochism) no endrika faran'ireo pôrnôgrafia ankafiziny raha oharina amin'ireo tovolahy. Miteraka olana goavana ho an'ny fitsarana amin'ny raharaha fanafihana ara-pananahana izany rehefa mandinika na nisy ny fanekena marina momba ny fisolokiana ara-pananahana na fanao BDSM.
Fetin'ny mpifankatia ao Belfast
Faly izahay tamin'ny fandraisana mafana azonay tamin'ny Andron'ny mpifankatia tao Lisburn, akaikin'i Belfast. Tonga izahay mba handray anjara amin'ny Herinandron'ny fahasalamana ara-pahasalamana atsy avaratra. Nisy fiovana mivaingana nampientam-po nanerana ny sehatry ny fitsaboana sy ny asa sosialy. Nasongadinay ny lohahevitra hoe "Pôrnôgrafia Internet sy Firaisana Ara-nofo." Indray, tsy gaga izahay nahita fa maro ny lahy, lahy sy vavy, tsy nahalala ny fifandraisan'ny ambaratonga avo lenta amin'ny fampiasana sary vetaveta amin'ny Internet ary ny fametavetana amin'ny tovolahy. Te hanasa anay hiverina bebe kokoa izy ireo.
TRF ao amin'ny Lagan Valley Civic Center, Lisburn any Irlandy Avaratra.
Henoy ireo manam-pahaizana momba ny fiankinan-doha
Tena mety ho anao ny anjaranao mandritra ny fotoana henoy ary mianara avy amin'ireo mpampianatra psikolojia roa ireo. Kent Berridge avy amin'ny University of Michigan, USA ary Frederick Toates avy amin'ny Open University any UK dia mitarika manam-pahaizana momba ny fiankinan-doha. Inona no manosika ny antony manosika, ny fahafinaretana ary ny fanaintainana? Zava-dehibe tokoa ny mahatakatra ny fomba mahatonga ny zanatsika sy ny tanorantsika ho lasa andevozin'ny pôrnôgrafia, filalaovana, filokana sns. Io no dingana voalohany ahafahantsika manampy azy ireo hanana fiainana salama amin'ny ho avy.
Ny mpampianatra Profesora Kent Berridge sy ny Frederick Toates
Mampianatra any Skotlandia
Tsara vintana izahay nitantana ny atrikasa iray andro farany tamin'ny 17th Martsa tao Kilmarnock talohan'ny nisian'ny fanidiana. Ny lohahevitra dia ny «Pôrnôgrafia Internet sy ny herisetra mahazo vahana».
Ny zavatra iray mahaliana izay nipoitra tamin'ny atrikasa teo aloha niaraka tamin'ity Filankevitra ity dia ny fiheverana ireo meloka amin'ny firaisana ara-nofo sy ireo voampanga ho herisetra an-trano dia tsy mitovy amin'ny manampahefana ara-dalàna. Ohatra, misy fitaovana fanombanana ny risika isan-karazany ho an'ny sokajy tsirairay ary tsy misy izany ny olana momba ny fiankinan-doka amin'ny pôrnôgrafia. Amin'ny alàlan'ny fampifandraisana ny fomba fampiasa an-tery ny pôrnôgrafia amin'ny Internet dia mety hiteraka fanapahankevitra ratsy, ny herisetra sy ny faneriterena ataon'ireo mpampiasa sasany, ny mpiasa ara-dalàna amin'ny heloka bevava dia mety hahita fidirana an-tsaratsara kokoa hanampiana ny fampihenana ny firongatry ny herisetra an-trano hirosoana. Ny fampiasana sary vetaveta mahery vaika dia mety hiteraka herisetra an-trano sy fanararaotana ara-nofo. Manantena izahay fa hiara-hiasa miaraka amin'ity Konsily ity indray amin'ity taona ity.
Horonantsary mahafinaritra, fohy ho an'ny ankizy amin'ny taona rehetra!
Ny Reward Foundation dia ampahany amin'ny fivondronan'ny fikambanana. Manao fampielezankevitra ny governemanta UK izahay hampihatra ny lalàna Age Verification ho an'ny tranonkala vetaveta. Alefaso azafady amin'ireo ankizy, ray aman-dreny, fikambanana tanora, solombavambahoaka, mpiasan'ny media sosialy, araka izay azonao atao ny manohana ity hafatra ity.. Jereo eto: https://ageverification.org.uk/
"Capping" dia ny fisintonana ankizy amin'ny fanaovana zavatra tsy mety, ohatra, raha mbola miaina izy ireo. Avy eo, raha tsy misy ny fahalalana ny zaza, ny sary na ny firaketana ny fihetsika tsy mendrika dia "voasambotra". Nampiasaina hanala na handoa ilay lasibatra izy ireo avy eo. Ny pedofily sy ny mpanendaka ara-pananahana hafa dia mpitsikilo maloto fa toy izany koa ny olona tsy manana firaisana ara-nofo amin'ny ankizy. Tsy mitady fomba mora hahazoana vola na entana fotsiny izy ireo. Mety hahakivy tanteraka izany amin'ireo ankizy tsy manana hevitra hahafahana hiatrika izany fandrahonana izany.
Mikaroka ny pôrnôgrafia lehibe momba ny areti-mifindra
"Amin'ny fotoan'ny krizy, ny orinasa mamoafady manampy trotraka ny fahantrana olombelona bebe kokoa. Nanao firaisana maimaimpoana eran'izao tontolo izao ny Pornhub. ” Nijoro ho vokatr'izany ny fijerena sy ny varotra…
“Tamin'ny sarimihetsika 1980 Fiaramanidina!, i Steve McCroskey, mpiandraikitra ny fifamoivoizana amin'ny alàlan'ny fifamoivoizana izay mikapoka ny fiaramanidina izay voan'ny tototry ny fanapoizinana ny sakafo avokoa. Hoy izy: "Toa nifidy ny herinandro tsy mety aho raha tsy nifoka sigara," hoy izy sady mamy be loatra. Taty aoriana, nanampy izy fa ny herinandro ihany koa dia ny "miala amin'ny amphetamines" ary avy eo dia "ny herinandro diso hanala ny lakaoly manelingelina."
WePROTECT eran'izao tontolo izao
Matetika ny ray aman-dreny dia manontany antsika ny tokony hataon'ny governemanta mba hampihenana ny loza manimba ny zanany amin'ny zanany. Ity bilaogy ity dia mampiditra ireo mpilalao sasany manan-danja indrindra, ao anatin'izany ny mpiara-miasa manerantany WePROTECT.
Tsindrio Eto hianatra bebe kokoa momba ny Global Alliance sy ny vondrona "Dimy Dimy".
Sexting sy ny lalàna
Mety ho gaga ny ray aman-dreny rehefa mahalala fa miely patrana ny sexting iraisana, mahazatra ihany koa ny sexting mifamono. Ny fikarohana dia mampiseho fa misy fiantraikany amin'ny fijerena sary vetaveta satria mandrisika ny hampihatra herisetra, fanodinkodinana ary fitaka. Ity bilaogy ity Ahitana ny pejinay manokana momba ny sexting sy ny fatiantoka ara-dalàna. Manana lahatsoratra mahaliana avy amin'ny gazety The Guardian ihany koa izy io.
Torohevitra torolàlana maimaimpoana amin'ny ray aman-dreny amin'ny Internet
Voahidy ao an-trano mandritra ny areti-mandringana, ankizy maro manana fidirana amin'ny Internet mora foana no hiditra amin'ny fitaovan'ny olon-dehibe. Mety ho toy ny fialamboly tsy mampidi-doza io, fa hiseho amin'ny fotoana mety kosa ny vokany. Raha ray aman-dreny ianao mianatra betsaka araka izay azonao atao momba ny fomba firesaka amin'ny zanakao momba ny pôrnôgrafia. Tsy inona izany fa ny pôrnôgrafia taloha. Jereo ny Torolàlana ho an'ny ray aman-dreny maimaim-poana amin'ny pôrnôgrafia amin'ny Internet ho an'ny horonan-tsary isan-karazany, lahatsoratra, boky ary loharanom-pitaovana hafa. Afaka manampy anao hanana ireo resaka sarotra ireo.
The Foundation Reward ao amin'ny Twitter
Araho azafady ny The Reward Foundation ao amin'ny Twitter @brain_love_sex. Ao no hahitanao fanavaozana tsy tapaka momba ny fikarohana sy fivoarana vaovao amin'ity sehatra ity rehefa miseho.